WAR DEG DEG AH: Soomaaliland oo ku dhawaawday go’aan culus oo ka dhan ah cidii laga maqlo “Farmaajo Iigeeya”. – Puntland News
Home 2017 February 16 Somali News WAR DEG DEG AH: Soomaaliland oo ku dhawaawday go’aan culus oo ka dhan ah cidii laga maqlo “Farmaajo Iigeeya”.
WAR DEG DEG AH: Soomaaliland oo ku dhawaawday go’aan culus oo ka dhan ah cidii laga maqlo “Farmaajo Iigeeya”.
Maamulka Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay inay xabsi dhigidoonaan cid kasta oo kasoo jeeda Soomaaliland oo ku lug yeelata siyaasada ka socota magaalada Muqdisho ama laga maqlo “Farmaajo Iigeeya, waxayna kusoo beegmaysaa iyadoo dad badan oo kasoo jeeda Soomaaliland ay Muqdisho yimaadaan kadib doorashadii Farmaajo iyo kahorba.
“Waxaanu xabsiga dhigi doonaa qofkasta oo Somaliland ka soo jeeda oo ka dhex ololeeya siyaasadda Muqdisho ka socota waxa uu doono ha ahaadee cid naga sii dayn kartaana ma jirto.” waxa sidaasi sheegay wasiirka warfaafinta Somaliland Cismaan Saxardiid oo la weydiiyey xadhiga dadka Muqdisho ka laabta.
One thought on “WAR DEG DEG AH: Soomaaliland oo ku dhawaawday go’aan culus oo ka dhan ah cidii laga maqlo “Farmaajo Iigeeya”.”
Hassan February 17, 2017 at 4:52 am · Edit
Adeer dictatorship waa kii Somali meeshii la ogaa oo ilaa & hadda ka soo noqon la’a nahaye haddii aad wax qaban weydey dadka guulwade Nino ma aqbalayane Minneapolis iskaga soo noqo ama xoogaga iska dhuuq inta haanta gadaankeeda aad ka gaareysid mr cadaani